१५ गतेदेखि बेपत्ता बिना यसरी हतारीदै कहाँ जाँदै छिन हेर्नुहोस सि-सिटिभि फुटेज (भिडियो सहित) – Ap Nepal
July 10, 2021 1156
गैंडाकोट – गैंडाकोट नगरपालिका–४ की २१ वर्षीया बिना सापकोटा असार १५ गतेदेखि बेपत्ता छिन्। छोरी हराएको पीरमा ४८ वर्षीया रीता सापकोटाले झपर्दी टोलस्थित घरमा ११ दिनदेखि आफूलाई सम्हाल्नै सकेकी छैनन्। काखमा सिरानी च्यापेर रुँदै बस्छिन्। बेला–बेला बरबराउँछिन्।
घरमा आउने आगन्तुकलाई उनी छोरी छिटो खोजीदिन अनुरोध गर्छिन्। ‘बाआमाको पीडा बुझ्ने भगवान्जस्ती थिई छोरी। उसकै पीरले छाती पोलेको छ। कहाँ होलिन् ? कस्तो अवस्थामा होलिन् ?’, रीताले रुँदै भनिन्, ‘छोरीको पीरले सिरानी च्या’पेर बस्नी दिन आयो। जे भए पनि मेरी छोरी छिटो खोजी दिनुपर्‍यो।’
अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार रीतालाई सम्हाल्न गाह्रो भएपछि भित्तामा झु’न्डा’इए’का फोटा सबै झिकिएका छन्। नत्र छोरीको फोटो देख्यो कि उनी रोइहाल्थिन्। छोरीलाई कसैले ब’न्ध’क बनाएको आशंका छ उनको। फर्कन्छे भन्ने लागेको छ। ‘छोरीको खुसीको कुरामा कहिल्यै रोकेनौँ। बाआमाको पीडा व्यवहार बुझ्ने छोरी हो’, उनले भनिन्, ‘जुन छोराछोरीको भरमा परियो आज उसको पीडामा रुनुपरेको छ।’
छोरीको अवस्था पत्ता लाग्ने आशामा चिना हेराउन पनि धेरै ठाउँ चहारे। नवलपुरबाट काठमाडौं, भक्तपुरका थाहा पाएसम्म सबैकोमा पुगिसके। गैंडाकोटमा हेराउने भन्नेकहाँ पुगिन्। हेराउनेले सोमबारसम्म घर फर्किने बताएपछि उनी त्यसको भरमा परेकी थिइन्। तर, सोमबारसम्म केही पत्ता नलागेपछि उनी झन् चिन्तित बनेकी छन्।
५० वर्षीय जायश्वर सापकोटालाई श्रीमती सम्हाल्न निकै गाह्रो परिरहेको छ। छोरी खोज्न बिहानै निस्केर साँझ फर्किंदा जायश्वर जवाफविहीन हुन्छन्। छोरीको अवस्था के होला भन्दै खोज्न निस्कन्छन्। निराश हुँदै फर्किन्छन्।
‘उसको पीडा हेर्दैमा ठिक्क छ। आफैं सम्हाल्न गाह्रो भएको बेला उसलाई सम्हाल्न निकै कठिन छ’, उनले भने, ‘अवस्था यो हो भन्ने मात्रै थाहा पाए पनि यो अन्धकार हुन्थेन। पीडा त कम हुँदै जान्थ्यो।’ बिनाको प्रेम सम्बन्ध भरतपुर महानगरपालिका लंकुका प्रवेश कँडेलसँग रहेको जनाइएको छ। उक्त सम्बन्धबारे दुवै परिवार जानकार थिए। प्रवेशका दाइको विवाह यही वर्ष भएका कारण दुई वर्षपछि उनीहरूको विवाह गर्ने कुरा भएको थियो।
दुई जनाबीचको प्रेममा अर्की युवतीको प्रसंग जोडिएपछि बिनाले सोधपुछ गर्न खोजेकी थिइन्। तीन जनासँगै बसेर कुरा गर्ने भनेर निस्किएकी थिइन्। प्रवेशको स्कुटर चढेर भरतपुर गएको जायश्वरले बताए। उनका अनुसार अर्की युवतीको घरनजिकको चौरमा बसेर गफ गरेका थिए। त्यसै क्रममा बा’झाबाझ हुँदा बिना बे’होस भएकी थिइन्।
बिनालाई घर लगेर धुपबत्ती बालेर ठीक हुने भन्दै धुप किन्न पसल गएको खुलेको छ। त्यति बेलै बिनाको होस आएपछि प्रवेशले उनको अवस्थाबारे जायश्वरलाई जानकारी गराएका थिए। सवारी साधन खोजेर घर ल्याइदिन उनले प्रवेशलाई आग्रह गरेका थिए। बिना प्रवेशसँग रिसाएर हिँडेकी थिइन्।
त्यही क्रममा प्रवेशले मा’द’क प’दार्थ से’व’न गरेको स्थानीयसँगको सोधपुछमा खुलेको जायश्वरको भनाइ छ। प्रवेशले स्कुटर मागेर पुर्‍याउन खोज्दा बिना चढ्न मानिनन्। आफू चौबीसकोठीस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको एटीएममा पैसा निकाल्न जाँदा बिना बेपत्ता भएको बिनाको परिवारलाई प्रवेशले बताएका छन्। तर, बैंकको सीसीटिभीमा एटीएमको कार्ड हाले पनि पैसा झिकेको नदेखिएको जायश्वरले बताए।-इताजाखबरबाट।
बाँकी तलको भिडियोमा हेर्नूहोस
Prevचाँदीको बालाको लोभमा बालकको हत्या..
Nextयी किशोरले जसले आफू मर्दै गर्दा अरु ५ जनालाई जीवन दान दिएर गए… हेर्नुहोस उनको यस्तो राम्रो काम
सुरज र गौरीशाको पहिलो भेटमै चल्यो रुवा, बासी ! अब के यो जोडी जम्छ होला त ? ( भि, डियो सहित हेर्नुहोस )
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यस्ता छन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय…
चार नेपालीलाई अपहरण गरी बन्धक बनाई फिरौती रकम माग्ने पाकिस्तानीहरूको गिरोह पक्राउ